WhatsApp inogadziriswazve ne "bug fixes" | IPhone nhau
Chimwe chinhu chinoitika mumahofisi eWhatsApp Inc (mairi atinofungidzira kuti vanogovana interns neFacebook), nguva pfupi yadarika WhatsApp matsva haana kumira kusvika, ingangoita pamwedzi. Iyi haisi iyo WhatsApp yatinoziva, vakaichinjira imwe. Izvo zvisina kuchinja mania yayo yekusanganisira "bug fixes", uye ruzivo rwunotitaurira kuti mhando iyi yekuvandudza inogara ichitivigira yekumberi yekuvandudzwa ine, inonakidza kwazvo mitsva. Pane chero munhu anotenda "Bug Fixes" yeWhatsApp parizvino? Kunyangwe zvakavanakira isu tinofanirwa kutaura kuti pachiitiko ichi vakanongedzera kumashandisirwo echokwadi emabhii makuru. Tichava nenyaya dzakavanzika here? Ngatizviongororei, nekuti isu tinowana dzimwe nhau.
Tichingoshandisa iyo nyowani WhatsApp yekuvandudza masekondi mashoma, isu tatoona kuti chimwe chinhu chachinja, uye zvinoita sekunge vari pachokwadi «tsikidzi fixes«. Iko kunyorera kwakareruka, nekukurumidza, iyo keyboard inopindura neinonakidza nyore uye furemu inodonha patakatenderera kuburikidza neyekutanga menyu kuburikidza nhaurirano zhinji dzakagadziridzwa, ivo vari kubata nekodhi, uye isu hatina kukahadzika kuti vaive zvakawanda kugadzirisa ipapo. Asi ivo vakawedzera chimwe chinhu husiku uye hunyengeri, sezvavanoda, bhatani idzva.
Bhatani nyowani uye Vhidhiyo Mafoni mukodhi
Isu tinotowana bhatani iri, semuenzaniso muTeregiramu, kazhinji tinofamba tichienda kumusoro, kunyanya kuverenga hurukuro dzakakura mumapoka anotinakidza. Asi patakafanirwa kuenda zasi kwese yakazova hope dzehusiku. Zvekare, WhatsApp yaisanganisira otomatiki pasi bhatani pakupera kwehurukuro, uye saka zvichatichengeta tiri munzvimbo imwechete sezvatinoverenga kunyangwe meseji nyowani dziri kugara dzichiuya muhurukuro. Aya maWhatsApp ari zvishoma nezvishoma kudzidza, kunyangwe isu tisati taona nhau dzataitarisira senge mavhidhiyo kufona. Zvichakadaro, isu tinoziva kuti mune beta vhezheni yeapp unogona "quote" vashandisi uye mameseji mumapoka, chinhu chatinovimba kuti chichasvika mumavhiki anotevera.
Zvisinei, sezvatinoziviswa, vhidhiyo mafoni akatove akaiswa mukati mekodhi uye kumirira kuvhurwa kubva kumaseva eApple Zvakare, zvinoita sekunge bhatani rekuchinja pakati kumberi uye kumashure kamera yeIOS yashanduka bhuruu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » WhatsApp inogadziriswazve ne "bug fixes" isiri iyo
Ichokwadi .. Ini ndinotarisira kutsigirwa kwakawanda kweGIF kupfuura vhidhiyo yekufona .. pamwe neyakajairwa mafoni, inoitirwa chete kune boka revanhu: S
Pindura kuna Lex
IV  N (@ ivancg95) akadaro
Ivo vatora tsika yekunyepa neiyo «Bug fixes». kuona pavanoona kuti haina kumanikidza.
Pindura kuna IV  N (@ ivancg95)
CurrentC, remangwana Apple Kubhadhara mukwikwidzi, inononoka kuvhurwa kwayo zvakare